यो चुनावमा भ्रष्टहरुलाई भोट हैन भाटे कारवाही गरौँ ! – Complete Nepali News Portal
यो चुनावमा भ्रष्टहरुलाई भोट हैन भाटे कारवाही गरौँ !
April 1, 2017	11,464 Views
– सुमित्रा घिमिरे
समृद्दिको कुरा गर्नु छैन, बिज्ञान प्रबिधि र पूर्वाधारको कुरा गर्नु छैन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गर्नु छैन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नु छैन, जनस्वास्थ्यको कुरा गर्नु छैन, उत्कृष्टताको कुरा गर्नु छैन, ईमान्दारिताको कुरा गर्नु छैन, लोककल्याणकारी राज्यको कुरा गर्नु छैन, जनतालाई काठको घोडा ठान्ने एक्सपायर्ड र टेस्टेड दल हरुको नौटङ्की हेर्नुस :
एमालेको नारा : जवानीमा साथ
देऊ,बुढेसकालमा त एमाले छँदै छ रे ?
भातमाराहरु ! जवानी भरि जनतालाई अन्धकारमय बनाए, उखान मात्रै जोतेर आफू अर्बपति बने, जनता कंगाल बनाए । हिजोका चप्पलेहरु राजनीति गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएर झक्कले भए, चरीका गोठालाहरु ! राज्यकोषबाट करोडौँ सुविधा हसुरे,केही नारा पाएनन्, आफ्नै खल्तीबाट झिकेर बृद्दभत्ता दिए जस्तो गर्छन् ! ख़ुराफ़ातीहरु !! बिष्वको दोश्रो ठूलो जलश्रोतको धनी देशमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्छन् !
माओवादीको नारा गाउँगाउँमा फ्रि वाइ-फाइ रे !
लाज पचेकाहरु ! उ बेलामा टेलिफोनका टावर ढलाउने तिनै, स्कूलका किताब जलाउने तिनै, मान्छेका शरीरमा गोलीका छर्रा त निकालिदिएका छैनन्, शहिद परिवारको बिचल्ली छ, जनतालाई जाति धर्म र सम्प्रदायका नाममा बिभाजन गर्ने, भत्केका पूर्वाधार कहिले बन्ने हुन् ? सर्वहाराका नेता सुबिधाभोगी हुने,गाउँका अनपढ़ जनतालाई वाईफाईको सपना बाँड्छन्, सिटामोलको कुरा गर्दैनन् । अब गाउँमा भैसीले वाईफाई चलाउँछ? तिम्रै डरले आज युवाहरु जति खाडीमा छन् !
कांग्रेसको त के कुरा भो र ! भ्रष्टाचारीलाई फूलमाला ओढाउँछन् , गुण्डाहरुकै बोलबाला छ, बिपी भजाउँदै बाँचेका छन् नकचराहरु ! काम कुरो थाहा छैन बिपी बिपी भन्छन्, खान पाए जे पनि गर्छन् ! भुकम्प पिडितको जस्ता पाता त निल्छन् ! देश ख़तम पार्ने यिनै हुन् । यिनको रुख़ पनि देखियो, रुप पनि देखियो ! अझै के भनेर गाउँ पस्ने होलान् यिनीहरु !
राप्रपाका डुकुरे मुसाहरुको त के कुरा गर्नु र ! जता कपड़ा देख्छन् : उतै काट्न हिड्छन् । जहिले पनि दशैँ छ यिनलाई ! टोपी बदल्यो: कहिले पन्चे, कहिले बहुदले, कहिले गणतन्त्रे !! मुसालाई चारो खुवाउने हामी पनि भेँडै हौँ ।
मधेशवादी दलहरु त बिष्णुमतीको ढल जस्तै गन्हाए ! मान्छेलाई मुठभेड़मा हुले, शहिद बनाए,अनि ब्लड मनिबाट पनि कमिशन हत्याउन पछि परेनन्, मौक़ा पर्दा परिवार भन्दा पर सरेनन् ! अझ त्यसमाथि यिनीहरु त
दिल्लीका दूतहरु भए ! कुरै नगरौँ !
अबको चुनावमा यी चोरहरुलाई भोट हैन भाटे कारवाही गरौँ ! हाम्रा हैन राम्रालाई भोट दिऊँ । को राम्रो को नराम्रो तुलना गरौँ ।
मलाई त अब अरुको भर छैन, दाग नलागेका पार्टी र मान्छे बाहेक अरुलाई त भूत लखेटेसरी लखेट्ने हो ! अब पनि यिनीहरुलाई देश लुट्न दिने हो र ?
छानी छानी भ्रष्टलाई चुनाव जिताएर पठाउने र दोष चाहिँ लोकतन्त्रलाई दिने ? अब पनि झूठको पोको लिएर आउनेलाई त भोट हैन भाटे कारवाही गर्नुपर्छ है ! मेरो दल र मेरो नेता भनेर हनुमान नबनौँ ।